မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: 01/01/2016 - 02/01/2016
တိုင်းတပါးရောက် မြန်မာတွေ မြန်မာပြည်ပြန်လည်မယ်ဆိုတိုင်း ဟိုရောက်ရင်ဖြင့် ဘာတွေစားပစ်မယ်၊ ဘယ်တွေသွားပစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးရှိကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ခုလို ဖေ့ဘွတ်ခေတ်မှာ မြန်မာပြည်ကလူတွေ ချက်အင်ဝင်တဲ့ကိုယ်မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဆိုင်အသစ်တွေကိုလဲ စမ်းကြည့်ချင်၊ အရင်က ကိုယ်စားဖူးတဲ့ ဆိုင်ဟောင်းတွေကိုလဲ လက်မလွှတ်နိုင်၊ အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းသိပ်မစားဖြစ်တဲ့သူကျတော့ အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းလွမ်းကြမှာပေါ့နော်။ မဗေဒါကတော့ ဒီမှာလဲ အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းအမြဲစားနေရတော့ အရမ်းတော့မလွမ်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မဗေဒါအထင်တော့ အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းဘယ်လောက်လွမ်းလွမ်း ကျန်တဲ့ မုန့်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေကိုလဲ လက်လွတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ပြန်တာ ၂ပတ်ဆိုရင် အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းကို ၃ရက်လောက် စားရရင် လုံလောက်နေပြီ။
နောက်မှ ကျန်တာတွေ ပြောဖြစ်ရင်လဲ ပြောတော့မယ်။ ခုတော့ မြန်မာပြည်ပြန်တုန်း မြည်းခဲ့စမ်းခဲ့ စားခဲ့သောက်ခဲ့တာလေးတွေကို ကိုယ်လဲ ဓာတ်ပုံရိုက်မိသလောက် မှတ်မိသလောက် ပြောပြမယ်နော်။ စားခဲ့သမျှဆိုင်တိုင်း ဝမ်းမလျော၊ ဗိုက်မနာ၊ ဆေးခန်း မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ အထိုက်အလျောက် သန့်တယ်ထင်တာပဲနော်။
၁။ မြကန်သာ “အုန်း” မြန်မာထမင်းဆိုင်
Date visited : 2nd Nov 2015
Accessibility from downtown: 4/5
Facility: 2/5 (no aircon and hot. It looks like temporary shelter to me)
Price: 3/5 (normal dish 4000kyats. Free flow of rice, ပုဇွန်ထုတ် စတဲ့ ဟင်းတွေကတော့ ဈေးနည်းနည်းပိုများတယ်)
သူက မြို့မကျောင်းလမ်းမှာရှိတာ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ဘက်က ဝင်ရင်နီးတယ်။ ဖေ့ဘွတ်မှာသူများရှယ်ထားတာတွေ့လို့ သွားစားကြည့်တာ။ ဆိုင်က ဆားဗစ်လဲ မြန်တယ်။ အထိုက်အလျောက်လဲ သန့်တယ်။ ဟင်းတွေကလဲ Feel လိုပဲ ဗန်းတွေနဲ့ ချထားတာကို ကြိုက်တာရွေးရတာလေ။ ဒါပေမဲ့ မဗေဒါအမြင်တော့ အကြော်အလှော်ပိုများသလိုပဲ။ ဆီပြန်ဟင်းထက်။ ဒါပေမဲ့ စားချင်စရာဟင်းတွေလဲ ရှိပါတယ်။ မဗေဒါကတော့ ဝက်သားအစပ်ကြော်စားဖြစ်တယ်။ အမေက ပုဇွန်ငရုတ်သီးကြော်နဲ့ အဖေကတော့ ဝက်သားအချိုချက်ဟင်းထင်တယ်။
အဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာ ဘာတွေကို သဘောကျသလဲဆိုတော့ ဟင်းချိုက အလကား။ လိုချင်ထပ်တောင်းလို့ရတယ်ထင်တယ်။ ဆားဗစ်မြန်တယ်။ တို့စရာပေးတာမှာ ဟင်းရွက်စုံတယ်။ တခြားဆိုင်တွေမှာ သိပ်မတွေ့ရတဲ့ သရက်သီးစိမ်းလေးတွေတောင်ပါတယ်။ စားပြီးရင် အစာကြေစားဖို့ မြန်မာ့ရိုးရာ ထန်းညက်နဲ့ ဧည့်ခံတယ်။
ဘာတွေ တိုးတက်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ ဆိုင်က အလုပ်သမားတွေက အရမ်းသွက်လက်တာကို သဘောကျပေမဲ့ တစ်ခုခုလိုတာမှာလိုက်ရင် ကိုယ့်နားကနေ နားစည်ပွင့်တဲ့အထိ အော်ကြတာစားရတာလန့်လန့်သွားတယ်။ ကိုယ်မှာတာများ မကျေနပ်လို့ ပိုအော်သလားထင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျက်နှာတွေကတော့ မကျေနပ်တဲ့ မျက်နှာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားဝိုင်းကမှာလဲ အဲလိုပဲ ကုန်းအော်ကြတာ။ အော်မှကြားမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ အော်မဲ့အစား အနားနည်းနည်းတိုးပြောလိုက်လဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ မြန်မာပြည်က ထမင်းဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုလားတော့ မသိဘူး။ နိုင်ငံခြားသားသာ လာစားရင် လန့်သွားနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆိုင်က အဲကွန်းတွေဘာတွေနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တင်လိုက်တုန်းက ဒညင်းသီး ၃လုံးကို ၅၀၀ကျပ် ပေးရတာ ဈေးများတယ်လို့ ကိုယ်က ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကပြောတော့ ခု မြန်မာပြည်မှာ အဲ့ဈေးပဲတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒညင်းသီး ၃လုံးမှာ တစ်လုံးက အပုတ်ပါနေသေးတာ။
၂။ ပန်းဆွယ်တော် စားသောက်ဆိုင်
Date visited: 3rd Nov 2015
Shop ambient : 4/5
သူက ပြည်သူ့ရင်ပြင်ထဲက မြန်မာကာလ်ချာဗဲလီး (Myanmar Culture Valley) မှာရှိတာ။ အဲ့ဒိနေ့က မိဘမဲ့ကျောင်းတွေ အလှူလုပ်ဖို့ လိုက်စုံစမ်းရင်း ည ၈နာရီခွဲ ၉နာရီလောက်ဖြစ်သွားတော့ စားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများပိတ်ကုန်တာနဲ့ ဖွင့်တဲ့ ဆိုင်ကိုရောက်သွားတာ။ အရင်က Channel7က အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ရဲဝင့်သူနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း Cherry FM က DJ ထက်ကျော်ဖြိုး တို့ ၂ယောက်က ကိုယ်အလှူလုပ်ဖို့ မိဘမဲ့ကျောင်းတွေ ကူရှာပေးတယ်လေ။ သူကလဲ ကိုယ့်စာဖတ်သူပရိတ်သတ်၊ ကိုယ့်အတွက် ကျတော့လဲ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အလုပ်ကို သူက professional လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ သူ့ကို လေးစား။ ကိုယ်က multicamera production ကို စာတွေ့ပဲ သင်ဖူးတာလေ။ Cherry FM ကိုလဲ တိုက်စီစီးရင်း သူတို့အသံတွေ ကြားဖူးတော့ ကိုယ်ကလဲ သူတို့ ပရိတ်သတ်ပဲပေါ့။ မောင်နှမတွေလို အချင်းချင်း အပြန်အလှန် လေးစားခင်မင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်စာဖတ်သူထဲမှာ ဒီလို Celebrity တွေပါနေလို့လဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ စကားပြောရတာလဲ မြန်မာပြည်က ကိုယ်မသိတဲ့အကြောင်းတွေ အစုံသိရလို့ တကယ်ကို update ဖြစ်ပြီး သတင်းစုံ လဲရပါတယ်။ ကိုယ့်ကို မိဘမဲ့ကျောင်း ကူရှာပေးတာရော၊ ကိုယ့်မောင်လေးတွေလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းခင်မင်ရတာကြောင့်ရော ဒစ်နာလိုက်ကျွေးဖြစ်တယ်။
ထားပါတော့ စားသောက်ဆိုင်အကြောင်းဆက်မယ်။ ပန်းဆွယ်တော်စားသောက်ဆိုင်က အပြင်အဆင်ကတော့ အတော်လေးသားသားနားနားရှိပါတယ်။ သစ်သားကနုတ်ပန်းတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့။ မန်နျူးထဲကဈေးတွေကတော့ အသေးအဖွဲ ၃၈၀၀ ကျပ်လောက်နေ ၇၀၀၀/၈၀၀၀ ကျပ်လောက်အထိ ရှိတယ်။ တခြား အထူး မန်နျူးတွေကတော့ ဒိထက် ဈေးကြီးတာတွေလဲရှိမှာပေါ့နော်။
အဲ့မှာ စားခဲ့ဖြစ်တာက ဝက်သားပေါင်းထမင်း၊ ပုဇွန်ဆီနယ်ထမင်းနဲ့ ကြက်ကြော်၊ ပင်လယ်စာ တုန့်ရန်းဟင်းချို…
အရသာကတော့ မဆိုးပါဘူး။ အမေကတော့ ပဲကြာဇံသုတ်လိုဟာမျိုးကို သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ပေးတဲ့ portion က နည်းနည်းသေးပေမဲ့ တစ်ယောက်စာအတွက်တော့ စားလို့ရပါတယ်။ အစားကြီးတဲ့သူဆိုရင်တော့ မလောက်မှာ သေချာတယ်။
ဘာတွေတိုးတက်ဖို့ လိုအပ်သလဲဆိုတော့။ စားပွဲထိုးတွေက ဆိုင်ပိတ်ခါနီးမို့ပဲလား ဘာလားတော့ မသိဘူး မလုပ်ပေးချင် သလိုလိုနဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အစားအသောက်အပြင် ဝန်ဆောင်မှု ၁၀ရာခိုင်နှုန်းပါ ပေးရတဲ့ ခုလိုဆိုင်မျိုးမှာ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းကို မျှော်လင့်တယ်။ ခုကျတော့ ဆိုင်ထဲမှာဖြင့် စားနေတာ စားပွဲလေး ၃လုံးလောက်မှာပဲ လူရှိတယ်။ စားပွဲထိုးတွေက ၅ယောက် ကနေ ၇ယောက်လောက်ထိရှိပေမဲ့ တစ်ခုခုလိုချင်ရင် အကြာကြီးစောင့်ရ၊ မနည်းမျက်လုံးချင်းစုံအောင်ကြည့်ပြီးမှ ခေါ်ရနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေလှဘူး။ ပိုက်ဆံရှင်းတဲ့ကောင်တာက ကောင်မလေးကတော့ ရီရီမောမောနဲ့ မျက်နှာချိုပါတယ်။
၃။ Ahjumma Kitchen
Date Visited: 5th Nov 2015
နဝဒေးလမ်းမှာရှိတဲ့ Ahjumma Kitchen ကိုလဲ အလည်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆိုင်ရှင်က ကိုယ့်ဘလော့လာဖတ်နေကျသူကနေ ခုတော့ အပြင်မှာပါ ခင်မင်နေတဲ့ ညီမတစ်ယောက်လေ။ အဲ့ဒိဆိုင်လေးက အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စကားအေးဆေးပြောလို့ရမဲ့ အနေအထားလေးမှာရှိတယ်။ မြို့ထဲနေတဲ့သူတွေအတွက် မြို့ထဲနဲ့ နီးတော့ အဆင်ပြေတယ်။ ဆိုင်နာမယ်က ကိုရီးယား အာဂျူမာကို ကိုယ်စားပြုလို့ ကိုရီးယားစာပဲ ရောင်းတယ်ထင်ခဲ့တာ။ အမှန်တော့ ယိုးဒယားစာ၊ တရုတ်စာလဲရောင်းတယ်။
စားခဲ့တာတွေက ဝက်သားသုံးထပ်သားကင်၊ ဝက်ဆလပ်၊ ဘီဘင်ဘက် (ကိုရီးယားထမင်းသုတ်)၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ (အရွက်နဲ့ အသားရောကြော်)၊ နောက် သူငယ်ချင်းက ကိုရီးယားဝက်သားအိုးပူစားတယ်။
ဝက်သားသုံးထပ်သားကင်နဲ့ ဝက်ဆလပ်ကတော့ ဝက်သားကြိုက်တဲ့သူတွေ အရသာတွေ့မှာပါ။ သူက ဆလပ်ရွက်လေးတွေ၊ ပဲပင်ပေါက်လေးတွေ၊ ကြက်ဥလိပ်ကြော်ပါးပါးလေးတွေနဲ့ ကင်ချီ ကိုလဲ ကြိုက်သလို ထည့်စားလို့ရအောင် သည်းသန့်ပန်းကန်လေးတွေနဲ့ ပေးတယ်လေ။ အရွက်တွေကလဲ လတ်ဆပ်တယ်။ ပူပူလေး စားသင့်တယ်။
ကိုရီးယားထမင်းသုတ် ဘီဘင်ဘတ်က မြန်မာနိုင်ငံက ကာစတန်မာနဲ့ သင့်တော်အောင် ထမင်းများများလေးလုပ်ပေးထားတယ်။ ကိုယ်ကတော့ စင်္ကာပူစတိုင် အရွက်အသားက ထမင်းထက် များတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ ထမင်းတွေများတော့ ကုန်တောင်မကုန်ဘူး။ ဒါကလဲ နောက်တစ်ခေါက်စားဖြစ်ရင် လျော့ထည့်ဖို့ပြောလို့ရတယ်လေ။ များတာက ကိစ္စမရှိဘူး။ နည်းတာက ကိစ္စရှိတာမဟုတ်လား။
တရုတ်စာ ပြည်လုံးချမ်းသာတို့ ယိုးဒယားစာ တုန်ရန်းဟင်းချိုတို့ကတော့ ပြောစရာမရှိအောင် ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တွေ မြန်မာပါးစပ်နဲ့က အကိုက်တွေကိုး။ အမေက ကိုရီးယားစာမကြိုက်၊ ဝက်သားမစားတဲ့သူဆိုတော့ သူတို့ဆိုင်မှာ ခုလို တရုတ်စာ ယိုးဒယားစာပါရတော့ မဗေဒါတို့ မိသားစုလို တစ်ယောက်အကြိုက်တစ်မျိုးသမားတွေအတွက် တစ်နေရာတည်းမှာ အဆင်ပြေတယ်။ ခုဆိုရင် Ahjumma Kitchen က ထပ်မံ ပြင်ဆင်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်။ သူတို့ ရဲ့ Ahjumma Kitchen facebook page မှာ သူတို့ဆိုင်က စားစရာတွေ သွားငန်းလို့ရတယ်။ ကြည့်ထားပြီး ရန်ကုန်ရောက်ရင် စားပေါ့နော်။
လိပ်စာက ၂၃B Nawaday Street, Dagon township.
ကိုယ်ရောက်ခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာတုန်းကတော့ ဆိုင်ထဲကို ဝင်တဲ့ တံခါးပေါက်ကို မနည်းရှာခဲ့ရတယ်။ သူက လမ်းမဘက် မျက်နှာစာ အောက်ဘက်က ဆိုင်က ပြင်နေတယ်။ အာဂျူမာကစ်ချင်းက ဘေးက လှေကားဘက် အပေါက်ကဝင်ရတာ။ ခု ပြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ ပြောင်းသွားပြီလားတော့မသိဘူး။ ဘာပဲပြောပြော အေးအေးဆေးဆေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ အစားကောင်းကောင်းစားချင်ရင်တော့ သွားလိုက်နော်။
၄။ ရွှေဗလီ ဒိန်ချဉ်
Date Visited: 6th Nov 2015
Shop ambient: 2/5
ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တိုင်း ညပိုင်းဆို သွားသောက်ဖြစ်တာ ဗိုလ်ဆွန်ပတ်လမ်း အလယ်လမ်းထိပ်က ရွှေဗလီ ဒိန်ချဉ်ဆိုင်ကိုပါ။ သူက လမ်းဘေးထိုင်သောက်ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အရသာစစ်စစ် ခုံပုလေးတွေနဲ့ ထိုင်ပြီး လမ်းသွားလမ်းလာတွေငေး၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စကားစမြည်ပြောရတဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုကို အပြည့်အဝခံစားလို့ရပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း စင်္ကာပူမှာနေပြီးကတည်းက မြန်မာပြည်က လဘက်ရည်တွေကို အရမ်းချိုတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ချိုပေါ့လို့ပြောလဲ ချိုနေတာပဲ။ အီလွန်းတယ်။ ဒိန်ချဉ်ကျတော့ သောက်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ သူတို့ဆိုင်က မလိုင်လဲပါတယ်။ (မလိုင်အစစ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကိုယ်မသိ၊ သောက်လို့တော့ကောင်းတာပဲ)။
ခွက်ကြီး ၇၀၀ကျပ် ခွက်သေး ၅၀၀ကျပ်။ အိမ်ယူသွားမယ်ဆိုရင်လဲ ပလပ်စတစ်ဗူး ပါကင်ပိတ်နဲ့ အသေအချာပေးတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အဲ့ဆိုင်မှာ သောက်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုက မြန်မှမြန်။ ကိုယ်အဲ့နားမှာ ယောင်ပေပေသွားရပ်လိုက်တာနဲ့ ဆိုင်ရှင်က သူ့အလုပ်သမားတွေကို အမြန် ထိုင်ခုံစီစဉ်ခိုင်းတယ်။ တချို့ဆိုင်တွေလို လုပ်ပေးချင်သလို မလုပ်ပေးချင်သလိုလို။ ရှောင်လို့ရရင် ပတ်မရှောင်နေဘူး။ ဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့် ကွပ်ကဲနေတော့ ကာစတန်မာအတွက် အဆင်ပြေတယ်။ အဲ့ဒိ ဒိန်ချဉ်ဆိုင်ဘေး လမ်းပေါ်မှာ အီကြာကွေးပူပူလေးတွေကို ဆီအိုးကြီးနဲ့ အိုးပေါ်က ချက်ချင်းကျ ချက်ချင်းစားလို့ရတဲ့ အီကြာကွေးသည်ရှိတယ်။ ဒိန်ချဉ်ထဲကို အီကြာကွေးပူပူလေး နှစ်ပြီး စားရတာအရမ်းကြိုက်တယ်။
အီကြာကွေးထဲကို ဒိန်ချဉ်အရသာက စိမ့်ဝင်ပြီး အီကြာကွေးပူပူရဲ့ ကြွပ်ရွရွ အရသာကိုလဲ ခံစားလို့ရတယ်။ ဂလု… ရေးနေရင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်အတွေးနဲ့ စားချင်လာဘီ။ ညအရမ်းနောက်ကျမှ သွားရင်တော့ အီကြာကွေးသည်က မရှိတော့လောက်ဘူး။
ကျန်တဲ့ဆိုင်တွေအကြောင်း ဆက်ရေးမယ်နော်။ ခုတော့ ဒီလောက်နဲ့ အရင် တစ်ပုဒ်တင်လိုက်အုံးမယ်။ နောက်မို့ဆို မတင်ဖြစ်မှာစိုးလို့… (အပိုင်း ၂… မျှော်ပေါ့)
ဝေခွဲမရ ချစ်ဒုက္ခထက် ဆိုးတယ်။ ၂နှပ်ပဲ စားဖို့ အချိန်ရှိတယ်။ စားချင်တာက ၂နှပ်စာမကဘူး။ အာ့တွေဘယ်လိုစားခဲ့သလဲ နောက်တစ်ပိုစ့်မှာ မျှော်
Posted by mabaydar at 4:19 PM3comments :
Labels: Myanmar Trip , ေဝဖန္ေရး
သင်မသိသေးတဲ့ “Cheese in the Trap” က မင်းသား Park Hae-Jin အကြောင်း
ခုပြနေတဲ့ Cheese In the Trap ဆိုတဲ့ ကားလေးကို ဘာမှ သိပ်မမျှော်လင့်ထားပဲ မင်းသားက မဆိုးပါဘူးထင်လို့ စမ်းကြည့်မိတယ်။ သာမာန်အားဖြင့်တော့ မဗေဒါ ကြိုက်မယ်ထင်တဲ့ကားတွေဆို မကြည့်သေးပဲ စုထားပြီး အပိုင်း တော်တော်များများပြပြီးမှ ဆက်တိုက်ကြည့်ချင်တယ်။ မဟုတ်ရင် တစ်ပတ် တစ်ပတ် ဆန့်တငင်ငင်နဲ့ အရသာပျက်လို့။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မမျှော်လင့်ထားဘူး။ ဇာတ်လမ်းကလဲ သာမာန်လောက်ပဲထင်ရင်တော့ တစ်ပတ် တစ်ပတ်စောင့်ကြည့်ရလဲ ကိစ္စမရှိလို့ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ခု Cheese In the trap ကားကိုလဲ အဲလိုပဲ ထင်လို ၂ပိုင်းပဲ ပြပြီးပေမဲ့ စကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မ မှားသွားပြီထင်တယ်။ ခု အပိုင်း ၂ပိုင်းအပြီးမှာ ဆက်ကြည့်ချင်လို့ နေမထိ ထိုင်မသာတွေကို ဖြစ်ရော။ ခု အပိုင်း ၂ပိုင်းအထိတော့ ဇာတ်လမ်းက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို ဇာတ်ဆောင်တွေကလဲ သူတို့ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ နေရာနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျရှိပါတယ်။ မဗေဒါ ဘလော့မှာ ကိုရီးယားကားတွေ မင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မတင်ဖြစ်တာ ကြာနေလို့ ဒီပိုစ့်လေးကို ဒီမှာတင်လိုက်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲ၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေက mabaydarpage ပေါ်မှာပဲ ရေးဖြစ်တာ များနေလို့။
ဒါနဲ့ အဲဒိကားထဲက မင်းသား Park Hae-Jin ကို အားလုံးလဲ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ နာမည်ကြီး My love from the stars ကားထဲက ဒုတိယမင်းသားပါ။ သူ့ကို အဲ့ဒိကားမှာကတည်းက သဘောကျခဲ့တာပါ။ (Kim Soo Hyun လောက်တော့ ခရေဇီမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။) နောက်တော့ Bad Guys ကားမှာ စိတ္တဇ Serial killer လူသတ်သမားကနေ ရဲတွေကို အမှုကူလိုက်ပေးတဲ့ ထောင်သားအဖြစ် သူ့ကို ပိုကြိုက်ခဲ့ပြန်တယ်။ နောက်ပိုင်းလဲ အမေကြည့်နေတဲ့ တီဗွီမှာပြတဲ့ကားထဲ မကြာခဏမြင်မိတယ်။ ခုတော့ Cheese in the Trap ကားမှာ ၂ပိုင်းပဲ ကြည့်ရသေးတယ် အတော်လေး သဘောကျသွားလို့ သူ့အကြောင်းတွေ ဖတ်မိတယ်။
၁။ anti-fan တွေနဲ့အတူ လူမှုရေးလိုက်လုပ်တဲ့ မင်းသား
မင်းသားချော Park Hae-Jin ဟာဆိုရင် သူ့ကိုမုန်းပြီး အင်တာနက်မှာ မဟုတ်တမ်းတရား ကောလဟာလလျှောက်ရေးတဲ့ anti-fan တွေကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တရားစွဲပြီး သူ့ကိုတောင်းပန်တဲ့သူတွေကို သူနဲ့အတူ ပရဟိတ အလုပ်တွေ လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် တရားရေးရာ ကျေအေးပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Fans တွေ၊ anti-fans တွေထဲက တောင်းပန်တဲ့သူတွေနဲ့ အတူ ပရဟိတလုပ်ခဲ့တာ ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာဆိုရင် ၃နှစ်ဆက်တိုက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အလှူအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ အိမ်မီးဖိုဖို့ မီးသွေးတုန်းတွေ သွားရောက်လှူဒါန်းပါတယ်။ တခြား လိုအပ်တဲ့ အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလဲ လှူဒါန်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒိ အလှူအတောအတွင်းမှာလဲ သူက သူ့ Fan တွေ၊ သူ့ anti-fan တွေအားလုံးကို စတင်ချဉ်းကပ်စကားပြောပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လုပ်အားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကဲ… anti-fans တွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့ နေရာမှာ ဘယ်လောက်တော်တဲ့ မင်းသားလဲ။ ကိုယ်တောင် anti-fan ယောင်ဆောင်ပြီး သူ့အလှူမှာ လုပ်အားပေးချင်စိတ်ဖြစ်မိပါ့။
၂။ Fashion Designer တစ်ဖြစ်လဲ Park Hae-Jin
Park Hae-Jin ဟာ သရုပ်ဆောင်လောကမှာပါမက ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်အနေနဲ့လဲ သူ့ကိုယ်ပိုင် Brand V-modern ဆိုတာကိုလဲ တရုတ်ပြည်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ My love from the stars ကားပြအပြီးမှာ သူ့ရဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပေမဲ့ စတိုင်မိုက်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံတွေ၊ အရောင်စပ်ဆက်တတ်မှုတွေ၊ အပေါ်အောက် လိုက်ဖက်ညီအောင် တွဲဝတ်တတ်မှုတွေကြောင့် သူ့ဖက်ရှင်ဟာ တရုတ်ပြည်မှာ အတော်လေး နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။
Park Hae-Jin က “ကျွန်တော့ ဒီဇိုင်းတွေက ခုဈေးကွက်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Trend နဲ့ ကိုက်ညီမှာဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ကျွန်တော်က အားပေးပါတယ်။ သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းက အကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်းပဲလေ” လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲကို ဇူလိုင် ၁၇ရက် ၂၀၁၄ တုန်းက တရုတ်ပြည် ဘေဂျင်းမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မဟုတ်ပဲ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ဧည့်ခံခြင်း၊ အင်တာဗျူးဖြေခြင်း၊ ပွဲအတွက် လိုအပ်တာတွေ စီစဉ်ခြင်းပြုလုပ်ပြီး ဒီပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
၃။ Cheese in the Trap က Park Hae-Jin
Cheese in the Trap ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားက အွန်လိုင်းပေါ်က ပေါ်ပြူလာ ကာတွန်းဖြစ်တဲ့ Cheese In the Trap ကို ပြန်ပြီး အသက်သွင်းထားတာပါ။ အဲ့ဒိ ကာတွန်း အွန်လိုင်းမှာ စတင်ပြီး ခေတ်စားလာကတည်းက ပရိတ်သတ်တော်တော်များများက ဒီဇာတ်ကောင် Yoo Jung ဟာ Park Hae-Jin နဲ့ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုပြီး လူပြောများခဲ့ပါတယ်။ အခု ရုပ်ရှင်ကိုလဲ မင်းသား Park Hae-Jin နဲ့ပဲ ရိုက်မယ်ဆိုတော့ ပရိတ်သတ်အားလုံးအတွက် ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Star News နဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Park Hae-Jin က
“တကယ်တော့ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းမှ သရုပ်ဆောင်နိုင်ပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်မိတယ်” လို့ သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်အတွက် ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော့်ထက် Yoo Jung ဇာတ်ကောင်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ တခြားမင်းသားတွေလဲ အများကြီးရှိတော့ ဒီဇာတ်ကောင်ကို လက်ခံလိုက်ရတာ နည်းနည်းတော့ ရှက်မိပါတယ်။ အမှန်တိုင်း ဝန်ခံရရင်၊ ကျွန်တော် ဒီဇာတ်ကား ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်”
အဲ့ဒိနောက် သူဘာလို့ ဒီဇာတ်ကောင်ကို လက်ခံဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ဆက်ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်က ခုဆိုရင် အသက် ၃၀ကျော်ပြီလေ။ ဒီဇာတ်လမ်း အကျဉ်းကို ဖတ်ကြည့်တော့ စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ငါ ဇာတ်ကောင် စရိုက်တော်တော်များများကို သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီ။ နောက်ထပ် ဇာတ်ကောင်တွေကိုလဲ အနာဂတ်မှာ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်အုံးမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရဖို့ အခွင့်အရေးကတော့ ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်တော့ ဇာတ်ညွှန်းကို ဖတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒိမှာတင် ဒီဇာတ်လမ်းဟာ အတော်လေး လက်ရာကောင်းမယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။”
သူက ဆက်လက်ပြီး “ဇာတ်ကောင် စရိုက်တွေကလဲ ကောင်းတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် လက်ခံဖြစ်သွားတာ။ ပြီးတော့လဲ အခုအချိန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမလုပ်ရင် နောက်ဆို ကျောင်းသားဇာတ်ကောင် အဖြစ် ကမ်းလှမ်းမှုဆိုတာ ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူးလေ”
သူက ထပ်ပြီး “ကျွန်တော်တို့ ဒါရိုက်တာကလဲ Yoo Jung ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပို့ပေးတယ်လေ။ အဲ့ဒါတွေကို ဖတ်ပြီး လေ့ကျင့်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ကို ဖန်တီးဖြစ်တယ်။ ပရိတ်သတ်တွေ အမြင်မှာ ကျွန်တော်ဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ပေးနိုင်အောင် ကျွန်တော် တကယ်ကို ကြိုးစားနေပါတယ်။”
Note: မဗေဒါတို့များ သူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအသက်ရှိမရှိ သတိမထားမိလောက်အောင်ကို သူ့ကိုကြည့်ရင် ဇာတ်လမ်းထဲ မြောပါနေတာ။ မြန်မာပြည်က ကန်ဘောင်ပေါ်လျှောက်လိုက် စားသောက်ဆိုင်ထိုင်လိုက်နဲ့ တက္ကသိုလ်က ဆရာတွေထက်တောင် အသက်ကြီးလောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလုပ်တာ မြင်နေကျဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်က ဘာမှ ပြဿနာကို မရှိတာ။
Cheese In The Trap ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးက ခု အပိုင်း ၂ကြည့်ပြီးတဲ့အထိတော့ မဗေဒါကို စွဲဆောင်နေသေးတဲ့အတွက် ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကိုယ့်လို Cheesy fever လေးတွေ တက်နိုင်ကြပါစေနော်…
Posted by mabaydar at 5:17 PM5comments :
Posted by mabaydar at 8:03 PM 16 comments :